တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကျမရဲ့ အတ္တ
Posted by မေဓာဝီ at 1:53 AM
စိတ်ထားတတ်ရင် မြတ်သော အကျိုးခံစားရမှာပါ မမေဓာဝီရေ။ အသိလေးတစ်ခု ရလိုက်တယ်။
ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျနော်လဲ ရမှာ မဟုတ်ဘူး ကျောတာ အမရ.. မရဘူး ..တခုတောင်သွားသတိရလိုက်သေးတယ်..
ကျနော်လဲ တခါတုန်းက သင်တန်းတခုမှာ ဆရာဝန်တွေနဲ့ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ အဲလိုပဲ အဆောင်မှာ သန့်ရှင်းရေးတူတူ ကျတာ ဆရာဝန်မတွေက မလုပ်တော့ ကျနော်တို့လဲ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်ကွက်ပီးလှဲတယ်.. အိမ်သာဆေးတာတော့ နောင်ဘ၀မှာ ပိုလှချင်လို့ ဆေးတယ် ..ဟားဟား
ခက်တာက ...သေချာတယ် အဲဒါကျောတာ မလုပ်နိုင်ဘူး ဟီးဟီး
I think you did it right!! Dont feel bad as you dont have to help that spoiled brat. You dont have to say it explicitly that you despise her, you could teach her how to do it but let her do it as no one owes her or her parents for anything. Dont feel bad but get on with life!! Sometimes beingajerk orabi..th(mean woman) pays off.
မေရေ...တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီpostမဖတ်ခင်ထိ အဲဒီကျောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲ တို့အတော်လေးတင်းနေခဲ့တာ။ ဘယ်လိုပြန်ပညာပေးရမလဲ စဉ်းစားရင်း အတ္တမီးတွေတောက်လောင်နေခဲ့တယ်။ မေ့ရဲ့ ဒီpostလေးကပဲ တို့အတ္တမီးတွေကို ငြီမ်းစေခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးပါမေရယ်။ စန္ဒရာလို သူငယ်ချင်းမျိုး ကျောင်းတုန်းကတယောက်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တယောက်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်။ သူတို့ဘဝကတော်တော်ငြီမ်းချမ်းတယ်။
2/29/2008 1:26 AM
ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ပါ .. မမေဓါရဲ့ မိခင်ပြောတဲ့ဆုံးမစကားလေးကရင်ထဲကိုတစ်ခါထဲစွဲသွာားပါတယ်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါလုပ်ပေးတာ ငါ့စေတနာပဲ..ငါ့လုပ်ရပ်က ငါ့အရိပ်လိုလိုက်နေမှာပဲ..လို့တွေးလဲ ခနပဲ..များသောအားဖြင့်က ကိုယ်ကို အ လို့ ဒီလိုလုပ်ပေးတယ်လို့ပဲထင်ကြတာလေ..
3/02/2008 12:05 PM
မေဓာဝီမြင်သလို မမြင်ပါဘူး။ တာဝန်ကျေရမယ် ဆိုတဲ့ အသိရှိအောင် လုပ်ရမဲ့ အစား ဘရာဇီးမရဲ့ ရေသာခိုချင်တဲ့ စိတ်ကို အားပေးရာ ရောက်နေတယ်လို့မြင်တယ်။ နောက်လဲ သူဘယ်တော့မှ တာဝန်ကျေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
3/09/2008 5:09 PM
အတ္တလို့ ပြောရခက်ပါတယ် အစ်မရယ် ဒါက တာဝန်ပဲလေ .... တာဝန်ကိုတော့ ကျေပွန်ရ မှာ ပေါ့ ... နောက် အိမ်သာဆေးတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် က တော်တော် မရွံ တတ်ဘူး အစ်မရ ... ဒါပေမယ့် တစ်ခါ တစ်ရံမှာ ရွံ ချင်ယောင် ဆောင်ရတာတွေ ကြောင့် ကိုယ့်ဖာသာ တွေးတွေး ပြီးရယ်မိတယ် .... လူ တွေအကြောင်း အတူ နေတော့မှ သိတာတွေ လည်း အများ သား ခုဆို ကပ်တွက်တဲ့ သူနဲ့နေ တာ တစ်နှစ်ပြည့်ပြီ .... နောက်တစ်နှစ်ကျန် သေးတယ် .... စိတ်ညစ်တာတော့ အမှန်ပဲ ခက်တယ်အစ်မရေ ပြောမှ သိ ထိမှာ ဆိုတာ လူမှုရေးမှာ အတော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ လူမျိုးတွေမှာ တွေ့ ရတာပဲ မသိတာလား မသိ ချင်ယောင် ဆောင်တာလား တော့ ကျွန်တော် လည်းပြောတတ်ဘူး .... ခုတော့ ဆက်လက် သည်းခံစဲပေါ့ ... :) ဘယ်အချိန် နောင်ချိန် ပလေးမလဲ မသိ .....